Beddelka DPF | Adeegyada Nadiifinta iyo Soo celinta DPF. Nadiifinta DPF laga bilaabo .95
Waqtigan xaadirka ah loogu talagay Tusmada
Hada loo wado Raac
Adeegyada Nadiifinta / Soo celinta DPF
Maxaa U Bedelay DPF
Qalabka Nadiifinta DPF
Dammaanad Waxqabadka Nolosha
DATABASE KU DHAQANKA EPA
Beddelka DPF wuxuu bixiyaa OEM oo la ogolaaday oof-wareenka, adeegyada dubista & dib-u-dhiska DPF oo dhameystiran. Dooqa ugu wanaagsan ee Mareykanku ku doonayo inuu sii wado nadaafadda DPF mid dheer.
Goobaha Adeegga ama Soo wac Quote 833.373.2583 dheeri: 0
Maxay Tahay Sababta Loo Doorto Beddelka DPF?
Waxyaabaha kale ee DPF waxay leeyihiin goobo laga furo bil kasta aqoonyahanno tababbaran oo la aqoonsan yahay oo DPF ah.
Waan nadiifin doonaa ama soo celin doonaa wax kasta DPF nidaam la jeclaado xaalad cusub oo leh natiijooyin dammaanad qaad ah qayb yar oo ka mid ah kharashka cusub. Adeegyadayada DPF ka sokow, waxaan sidoo kale bixinnaa DOC (Kalluumeysiga Diesel Oxidation), SCR (Xakamaynta Kala-xulashada Xulista) iyo EGR (Dib u habeynta Gaaska Qiiqa) nadiifinta iyo dib u soo celinta. 833.737.2583 dheeri: 0
1 summad, 1 magac, adeeg isku mid ah, qalab isku mid ah = joogteynta adeegga iyo tayada waddanka oo dhan
24hr ilaa 48hr dib u noqosho
Qaadista iyo gaarsiinta bilaashka ah
Natiijooyin dammaanad leh ama aadan bixin
Natiijooyinka damaanad qaadka ah ee badbaadinaya boqolaal, kumanaan, ama malaayiin beddelka DPF. Iyada oo leh 3mo, 6mo, 1yr, iyo ikhtiyaarrada dammaanad qaadka nolosha oo dhan. Kaalay khibradda farqiga. Waxaan nahay xulashada ugufiican America ee nadiifinta iyo dib usoocelinta DPF. 833.737.2583 dheeri ah.0
Maxay muhiim u tahay in nadiifinta DPF (Filter filterka Diesel) ay muhiim tahay?
Nadiifinta iyo dayactirka DPF markasta 1aad ayaa kaa ilaalin doonta burburka aadka u qaaliga ah iyo kuwa aan loo baahnayn. Hadda ka sii badan abid, haddii aad si sax ah u ilaaliso nidaamka DPF waxaad si fudud uga fogaan kartaa fashilaadaha masiibada ah ee u dhexeeya $ 10,000 illaa $ 30,000. Kaftan malaha Ha noqon qofkan. Halkan DPF Beddelka qalabkeenna, geeddi-socodkeenna, iyo xalka SL100 ee lahaanshaha ayaa dib ugu soo celin doona DPF muraayadaha OEM. Dammaanaddeena waa mid aan la qiyaasi karin oo ugu fiican warshadaha. Waxaan kaa badbaadin doonnaa inaad haysato maalmo DPF aad u xun. 833.737.2583 dheeri ah.0
Maxay nadiifinta DOC (Diesel Oxidation Catalyst) muhiim u tahay?
DOC (Diesel Oxidation Catalyst) waxay muhiim u tahay shaqada DPF. Waxay si toos ah ugu fadhidaa dhinaca sare ee DPF. Haddii aan si sax ah loogu adeegin isla waqtiga DPF- waxay si dhakhso leh u xiri kartaa DPF. Dhawaq adag? Noo ogolow inaan sharaxno. Haddii DOC ay leedahay uruuris danbas oo aad ku rakibtay DPF cusub ama DPF nadiif ah arintaas, tan labaad ee aad ka bilaabayso mashiinka dhamaan dhoobada ka timid DOC waxay si toos ah u galayaan DPF taas oo sababi doonta in DPF ay dib u xirto Tani waa mid ka mid ah sababaha badan ee warshadan u ah macaamiisha inay la kulmaan laydhadhka mishiinka, awood gaabis ah, iyo kharashyo dheeri ah waxyar ka dib beddelaadda DPF ama adeegga. Waa madax xanuun aad u weyn dhammaanteen! I aamin. Ma beddeli doontid xafaayadda ilmaha oo kama tihid gadaashiisa miyaa? Ma filayo. Ha nadiifin, soo celin, ama beddel DPF adigoon u adeegin DOC. Keen labada DPF iyo DOC waxaanan hubin doonaa in dib loogu celiyo muraayadaha OEM. 833.737.2583 dheeri ah.0
Maxay nadiifinta SCR muhiim u tahay?
Tani waa mid khiyaano badan. SCR (Dhimista Hantidhowrka Xulista) wuxuu sababayaa arrimo qatar ah dalka oo dhan. Kharashka milkiilayaasha balaayiin doolar ah cilad-baadhis iyo beddelka SCR. SCR waxay fadhidaa dhinaca hoose ee DPF. Badanaa jihaynta daaweynta kadib waa sida soo socota: DOC, DPF iyo SCR. In muddo ah ilaa iyo maanta ilaa maanta dadku waxay leeyihiin, “Ma nadiifin kartid SCR”. Ma dhihi doono waa qaldan yihiin mana dhihi doono waan saxanahay. Waxa aan dhihi doonno - waxaan haysannaa foornooyin lagu adeegto oo ay ka buuxaan kumanaan nidaamyo SCR ah oo leh guul weyn oo ay ku jiraan nidaamyada Detroit 1box. Kaliya maahan in geeddi socodkeenu ka saari karo kaydka DEF ee loo yaqaan 'crystalized DEF' ee carqaladeeya qaybinta saxda ah ee gaaska qiiqa (oo markaa ka caawinaya kiciyaha yareynta (NOX) inuu u dhowaado eber ka soo baxa tuubada dabada) waan sameyn karnaa iyada oo aan waxyeello u geysaneynin Hantidhawrka laftiisa. Kahor intaadan badalin SCR $ 5,000 ama kabadan na soo wac. Waxaan dib ugu soo celin doonnaa OEM spec ama adigu si fudud ha u bixin. 833.737.2583 dheeri ah.0
Nidaamyada DPF ee aan adeegno:
Miyaadan arkin DPF-gaaga? Weli waan nadiifinaynaa. 833.737.2583 dheeri ah.0
Warshadaha aan adeegno:
Macdanta DPF, Dhismaha DPF, Beeraha DPF, Transit DPF, OTR DPF, Rakaab loogu talo galay fudud / dhexdhexaad iyo culus DPF. Ma aragtid warshadahaaga? Weli waan u adeegnaa. U yeer qiime. 833.373.2583 dheeri ah.0
~ Orod Nadiifi Dheer ™ ~
AKHRISO MAXAY SAMEEYAAN Macaamiisheena oo naga sheegaya :
Adeegyo Cajiiba Gacmaha Hoos
“Waxa kaliya ee aan leeyahay waa WOW. Tan iyo markii aan bilownay adeegsiga DPF Beddelka, waxaan keydineynaa oo ku darnaa qadkayaga hoose. Qiimaha Beddelka ah ee DPF ayaa ah kan ugu fiican, oo lagu daray soo qaadista iyo keenista - kaliya adeeg yaab leh ayaa hoos u dhacaya. Waxaan kula socodsiin doonnaa dhammaan adiga iyo adeegyadaada aan barbar dhigin. Mar labaad mahadsanid. ”
“DPF Beddelka ayaa beddelaya ciyaarta nadiifinta miirayaasha DPF. Waan sii farxi kari waayey. Waxaan haystaa 12 isx oo dhammaantood leh miirayaal. Rakaabtaydu waxay ka baxaan Atlanta iyo DPF Beddelka oo ka baxsan Magaalada Ganacsiga, Colorado waxay helayaan dhammaan nadiifintayda iyadoo gawaariddaydu ay dhex wareegayaan Colorado. Marnaba dib ugama noqon doono nooca nadiifinta ee aan horay u heli jiray. ”
Gaarigayga Xamuulka Ah Ayaa Si Wanaagsan U Socda !!!
Waxaan haystaa Ford F2008 350. DPF waa la xiray. Waxaan u geeyay ganacsadaha, ka dib markii ay sugayeen usbuuc ayay ii jiiteen gaari xamuul ah. Waxay ii sheegeen in qalabkeyga uu dillaacay oo uu u baahan yahay bedel, sidoo kale DPF waa la xiray oo loo baahan yahay in la beddelo. Waxay ahayd igu kacday ugu dhowaad $ 4K albaabka. Waxaan ka helay khadka tooska ah waxaanan baaray xulashooyinkayga. Sheeko gaaban, wuxuu nadiifiyey DPF-ga, wuxuu nadiifiyey qalabkeyga - isla kan ganacsaduhu sheegay inuu dillaacay una baahan yahay in la beddelo. Waxaan ka maqnaa albaabka $ 1000 hoostiisa xitaa xitaa qaar ka mid ah siyaado ah oo aan u sameeyay. Baabuurkayguna waa soconayaa !!!
Dhoobada waxay ahayd sida cusub
“Waa inaan qiraa, wax yar baan ka shakisnaa ikhtiyaarkaaga nadiifinta ah ee Filterka Diesel particulate Filter. Laakiin ka dib markii aan dhammeeyay, ma aanan farxi karin. Weligay DPF dib ugama soo noqon nadiifkan, dhoobada dhoobadu waxay ahayd sida cusub, sidaad u sheegtay. Tan iyo markii aan bilawnay adeegsigaaga gawaarida xamuulku ma duwdaan wax badan waxayna inbadan ka dheeraadeen nadiifintii asalka ahayd ee aan sameynayay. Mar labaad mahadsanid. ”
In ka badan 40
Goobaha Adeegga & furitaanka badan bil kasta
DPF Soo celinta
DPF WAXBARASHADA FURSADO FURAN
Kala doorbidyada DPF waxay leeyihiin fursado xayeysiin oo laga heli karo suuqyo badan oo si dhakhso leh u iibinaya. Haddii aad xiiseyneyso inaad ku biirto suuq aad u adkeysi badan, iyo suuq si dhakhso leh u koraya, qoyska DPF Beddelka ayaa had iyo jeer raadiya ciyaartoy kooxeedyo waaweyn oo doonaya inay isbeddel sameeyaan.
Mulkiileyaasha Dukaanka Dayactirka Diesel ee adeegga buuxa- eeg haddii aad u-qalanto inaad hesho qalabkeenna OO LACAG LA'AAN.
Kala xiriir kuxigeenkeena, Chris Burrei (435) 817-3828.
Nadiifinta DPF Ultrasonic = Xalka Qiiqa Sare
Qalabka Nadiifinta ee DPF-ka oo Farshaxan ah
DPF Beddelka ayaa ah alaab-qeybiyahaaga Aftertreamtment
Maraakiibta raasumaalka ka dhig miisaaniyada
Beddelka DPF : Nadiifiye Berri
Filterka Gaaska Diesel Gaarigaagu wuxuu ka caawiyaa ilaalinta deegaanka, iyo nidaamka nadiifinta Ultrasonic DPF ee lahaanshuhu wuxuu ilaaliyaa jeebkaaga. Adeegkeena nadiifinta DPF ee ultrasonic waa habka kaliya ee la xaqiijiyay ee loogu talagalay nadiifinta unug kasta oo ka tirsan DPF si loo jeclaado xaalad cusub. Nidaamka nadiifinta ee DPF Beddelka ah wuxuu yareeyaa kharashka iyadoo la kordhinayo nolosha waxtarka leh ee miirayaashaada. Aad ayaan ugu kalsoonahay tikniyoolajiyadeena, waxaan u fidinaa macaamiisheenna dhib la'aan, warshado horseed u ah, dammaanad waxqabad hal sano ah.
Nidaamkeenna nadiifinta ee sarreeya ayaa dib u soo celiya qaybaha qaybaha OE; damaanad qaadka dhaqaalaha shidaalka iyo nolol faa'iido leh oo ka shaandheyn kasta oo DPF ah. Nidaamkeena nadiifinta Ultrasonic wuxuu adeegsadaa mowjadaha dhawaaqa soo noqnoqda ee macaamiisha malaayiin dhiirigelin ah ilbiriqsi kasta si loo burburiyo dambas la dhisay iyo dambas. Xalkeenna sida gaarka ah loo diyaariyey ayaa wasakhda ka sifeeya qaybaha oo ka ilaaliya inay dib ugu dhegaan darbiyada unugyada. Waxyaalaha kale ee DPF waxay bixiyaan adeegyo nadiifin oo DPF ah oo beddel u ah beddelaadyada OEM ee qaaliga ah.
- Qalabka Nadiifinta oo loogu talagalay inuu sii wado nadaafadda DPF inay sii dheeraato -
Dammaanad-qaadka Nolosha ee Qeybaha korantada: 100% Maalgelinta Iibsadayaasha U Qalma
Qalabka Qiimaha Xidhmada min hoose ilaa sare. Dhammaan baakadaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ku soo celiso DPF xaaladdii ugu dambeysay. Wac si aad u hesho faahfaahin 833.737.2583 dheeri ah.0.
Heerka Gelitaanka iyo Xidhmada Dubitaanka $ 10,500.00
Xirmooyinka Dib U Soo Celinta Oo Dhameystiran • $ 41,447.90 • $ 43,447.90 • $ 43,693.15 • $ 54,662.90*Most Popular • $ 67,187.00 • $ 75,761.00 • $ 96,810.90
Wax Ka Baro Nadiifinta & Soo Celinta Filter Beddelka ah
Macluumaadka U-hoggaansanaanta EPA
Right Xuquuqda-Xuquuqda - DPF Beddelka